Abathengi beCargill's GMO Stevia Hoodwinks - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
Abathengi beCargill's GMO Stevia Hoodwinks
Posted on November 20, 2019 by UStacy Malkan
Inhlanganisela yamazwe omhlaba yokudla iCargill iyi ukukhulisa ukukhiqizwa kwezinga lokuhweba we-sweetener yalo eyenziwe ngofuzo, i-EverSweet, endaweni entsha yokukhiqiza engu- $ 50 million eqale ukusebenza kuleli sonto eBlair, eNebraska. Lesi sitshalo "sizokhiqiza i-EverSweet eyanele yokunambitha izigidi eziningi zamabhodlela / amathini eziphuzo ezibandayo noma ukunikezwa kweyogathi inyanga ngayinye," kusho okhulumela iCargill.
Isitshalo esisha sikaCargill se-GMO stevia
UCargill ukhangisa indawo yakhe entsha ye-stevia njenge “okungezona okwenziwe. ” Kusho ukuthini lokho? Abathengi abachofoza ku- kunikezwe isixhumanisi ekukhululweni kwabezindaba ngeke kuthole impendulo eqondile. Ikhasi le-web liyazisonga lifake amafindo lizama ukuchaza inqubo entsha, efaka imvubelo yobunjiniyela bokuguqula imolekyuli kashukela ibe yinto elingisa ukunambitheka kwe-stevia, njenge "ndlela yakudala yamakhulu eminyaka" - ngaphandle kokukhuluma ngobunjiniyela noma i-genetic modified izinto eziphilayo (ama-GMO) asetshenziselwa ukwenza umkhiqizo.
I-Cargill utshele i Star Tribune ayimakethi i-EverSweet ngokuthi "ingeyendalo" - ngakho-ke "ayiyona eyokufakelwa". Ubuqili abugcini lapho.
Cargill, iqembu lezeMvelo likaKhongolose uHenry Waxman alibiza ngokuthi “inkampani embi kakhulu emhlabeni”Ku-2019 (phakathi kwezinye izinto)" ukuphikelela kwayo okuphindaphindiwe kokuma endleleni yenqubekela phambili yomhlaba ekusimameni, "izimakethe ze-EverSweet njengokukhiqizwe" okusimeme ". Leso simangalo, njengoba sibikile Isihloko se-Huffington Post sika-2017, iphekwe ngosomaqhinga be-PR abanikezwe umsebenzi wokuthola ukuthi izithako ezingenziwa kanjani ezenziwa nge-vat zizwakala zinambitheka kanjani kubathengi abafuna ukudla okusha, kwemvelo okunamalebula acacile nelula.
Izinkampani nabatshalizimali ngokubuka kwabo kusethwe ekuhambeni kwe-stevia - namanye amanani aphezulu ama-flavour asekelwe ezitshalweni namakha - ukuphuma emapulazini nakumalebhu ahlangane ku Iseshini yamasu ka-2014 ukuxoxa ukuthi uwuthengisa kanjani lo mqondo kubathengi. Ochwepheshe be-PR kulo mhlangano bancome ukuthi kugwenywe amagama anjenge- “synthetic biology” nelithi “genetic engineering” (okwethusa kakhulu, ukubuyela emuva ngokweqile), futhi baphakamisa ukuhamba ngezincazelo ezingacacile ezinjengokuthi “ukuvutshelwa okutholakele” nokuthi “uhlobo olufanayo.” Bancome ukuthi kugxilwe izintatheli ezindabeni zethemba nezethembisayo, nokwenza izishoshovu zokudla “zizwe sengathi sonke simasha ngaphansi kwesibhengezo esifanayo” ukuze kube nokusimama kokudla, ukwenza izinto obala kanye nobukhosi bokudla.
Izinkampani nabathengi abakhathalela ngempela leyo miqondo bazokwenza kahle ukubheka ngemuva kwe-hype. Kuhlaka lukaCargill, i-Eversweet "iyaqhubeka" ngoba isusa ukukhiqizwa ezweni. Kepha akusho; indawo entsha yenkampani engu- $ 50 million “yokuvutshelwa,” esenhliziyweni ye I-GMO Roundup Ready izwe lommbila, kuzoncika kulezo zilimo ezifuthwe ngezibulala-zinambuzane - noma omunye umthombo kashukela otshalwe emhlabeni - ukondla imvubelo ezitsheni zayo ukwenza i-EverSweet. Ukukhishwa kwayo kwabezindaba kusebenzisa ama-buzzwords okusimama kepha akunikezi imininingwane yokuxhasa izimangalo. Sithinte inkampani sicela imininingwane eyengeziwe; akukho mpendulo okwamanje kepha sizofaka noma imiphi imibono esiyitholayo.
Okwamanje, abalimi emazweni afana neParaguay bebelokhu belima i-stevia izizukulwane ngezizukulwane, futhi benza imali enhle ngokutshala lesi sitshalo, kubika i-ETC Group. Isithangami Sezomnotho Emhlabeni kuphawulwe ocwaningweni lwezingcuphe zomhlaba ezihamba phambili zokuthi “ukusungulwa kwezindlela ezishibhile, zokwenziwa ezithunyelwa ngaphandle ezinenani eliphakeme… kungahle kungazinze umnotho osengozini ngokususa umthombo wemali abalimi abathembele kuyo.” Ngaphezu kwalokho, abalimi abampofu bakhuthazwe ngenkuthalo ukuthi batshale imali kwi-stevia, ngoba ukutshalwa kwayo kungasiza ekulondolozeni imvelo ebuthakathaka futhi eyingqayizivele.
Kubathengi base-US, kuya kuba nzima ukugwema i- ukudla okusha okwenziwe ngezakhi zofuzo ezithulele buthule ziye ezitolo zokudla ngaphandle kokulebula okucacile. Iqinisekisiwe i-organic noma engeyona eye-GMO eqinisekisiwe ihlala ingamazinga amabili azibophezele ekugwemeni i-biology yokwenziwa kanye nezithako ezenziwe ngofuzo.
Ngokuqondene neCargill, iyinkampani enkulu kunazo zonke ephethwe ngasese e-US, enkulu ukwedlula iKoch Industries edume kabi, futhi umkhondo wayo unabela emhlabeni wonke, kuphawula lowo owayenguNgqongqoshe Waxman, ongusihlalo womkhankaso weMighty Earth, ngoJulayi wabo kubika uCargill oyiNkampani Embi Kakhulu Emhlabeni. “Siyabona ukuthi lesi yisicelo esinesibindi. Kukhona, maye, izinkampani eziningi ezingalwela le nhlonipho engabazisayo. Kodwa lo mbiko uhlinzeka ngobufakazi obubanzi nobuphoqayo bokukusekela… Emsebenzini wami weminyaka engama-40 ngiseCongress, ngathatha izinkampani ezahlukahlukene ezazenza imikhuba yokuhlukumeza. Ngizibonele ngawami umthelela olimazayo wamabhizinisi angalethi izimiso zawo zokuziphatha ukusebenza. Kodwa uCargill ugqamile. ”
Ngabe ulilungele igagasi elisha lokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo? nguStacy Malkan, umagazini i-CommonGround (3.16.2018)
Hlangana neNew Stevia! Ama-GMO 2.0 Gqoka Impumelelo, nguStacy Malkan, uHuffington Post (6.15.2017)
Ukubheja Okubi Ku-Synthetic Biology: ICargill's Eversweet incintisana nabalimi kanye nabathengi abadukisayo, I-ETC Group (11.11.2015)
Imboni ye-Biotech ipheka izinhlelo ze-PR zokusenza sigwinye ukudla okwenziwe nge-biology, nguDana Perls, Abangane Bomhlaba (5.22.2014)
I-GMO I-Cargill, I-EverSweet, GMO, UHenry Waxman, Umhlaba Onamandla, I-Roundup isilungile, stevia, biology zokwenziwa, Inkampani Ebi Kunazo Zonke Emhlabeni